Torohevitra 50 amin'ny vavaka fifadian-kanina XNUMX FIVAVAHANA VAVAKA
Home Teboka am-bavaka 50 Hivavaka amin'ny fifadian-kanina ho an'ny fahatapahana
Deoteronomia 28:11 Ary hataon'i Jehovah be dia be ianao amin'ny entana, amin'ny ateraky ny vatanao sy ny ateraky ny biby fiompinao ary ny vokatry ny taninao, any amin'ny tany izay nianianan'i Jehovah tamin'ny razanao homena anao . 28:12 Hanokatra aminao ny rakitra soa ho anao, Jehovah, hanome lanitra ny taninao amin'ny fotoany sy hitahiany ny asan'ny tananao; ary hampisambotra ny firenena maro ianao fa tsy hisambotra..
Faniriana lehibe indrindra ananan'Andriamanitra ho an'ny zanany rehetra fandrosoana amin'ny fiainana. Tsy zanak'ANDRIAMANITRA iray no voatendry hanome fiainana ambany. Ny zanak'Andriamanitra rehetra dia voatokana hiaina amin'ny fiainana ambony. Ny fanapotehana dia midika hoe hahomby amin'ny zavatra rehetra ataonao amin'ny fiainana. Midika izany fa handresy ireo sakantsakana amin'ny fiainana, hamoaka ilay tompon-daka amin'ny fiainana. Androany aho dia nanangona 50 foto-bavaka fifadian-kanina ho an'ny fahatapahana. Ity vavaka miaraka amin'ny fifadian-kanina ity dia azo antoka fa hampiditra anao amin'ny fidobiana efa ela niandrasana anao.
Fa maninona no fifadian-kanina sy fangatahana hivavaka?
Matio 17:21 Nefa na izany aza dia tsy mivoaka ity fa amin'ny fivavahana sy ny fifadian-kanina.
Fifadian-kanina sy vavaka dia fomba mahomby hitadiavana ny endrik'Andriamanitra momba ny olana iray mampiahiahy amin'ny fiainanao. Rehefa mifady hanina isika dia tsy manandrana manome kolikoly an'Andriamanitra amin'ny fifadian-kanina ataontsika, ary ny fifadian-kanina ataontsika dia tsy hampihetsika ny tanan'Andriamanitra hitahy antsika. Ny antony mahatonga antsika fifadian-kanina dia ny fampitomboana ny fifantohantsika amin'ny vavaka, ny tsy fifadian-kanina izay omena hery fifadian-kanina na fahatsapana ara-panahy ary fifantohana rehefa mivavaka mba hahatanteraka ny faniriantsika. Raha maniry hahita fahombiazana amin'ny fiainanao ianao dia tsy maintsy miditra am-bavaka teboka fifadian-kanina ho an'ny fiomanana ara-panahy.
Rehefa mandray anjara amin'izany ianao teboka amin'ny vavaka fifadian-kanina, Hanomboka hiady amin'ny ady ara-panahy rehetra Andriamanitra. Koa satria mifehy ny lafiny ara-panahy ny fivoaranao ara-panahy, dia hanomboka amin'ny asanao ara-batana. Ireo laharam-bavaka fifadian-kanina ireto dia tsy maintsy hamarana ny fanjakan'ny fahantrana amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Ity vavaka fifadian-kanina ity dia manafoana ny fetran'ny fetra rehetra mitazona anao amin'ny anaran'i Jesosy. Mamporisika anao hamaky ireo aho hivavaka amin'ireto vavaka ireto amim-pinoana izao ary hahita Andriamanitra hanova ny tantaranao ho voninahitra amin'ny anarana jesosy.
1. Tompo ô, mangataka fahendrena aho mba handehanana ara-bola ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy
2. Tompo ô! Ataovy firenena lehibe aho; tahio aho ary ataovy lehibe ny anarako ary ho fitahiana amin'ity taranaka ity amin'ny anaran'i Jesosy aho.
3. Tompo ô! Misaora izay misaotra ahy, ary manozona izay manozona ahy. Amiko ato am-pitiavana ny fianakaviana rehetra ambonin'ny tany amin'ity taranaka ity amin'ny anaran'i Jesosy.
4. Laviko ny fanahin'ny fahantrana, ny tsy fahampiana ary ny filàna amin'ny anaran'i Jesosy.
5. Manenjika, misongona ary mamerina ny loharano rehetra nangalariko androany amin'ny anaran'i Jesosy aho.
6. Tompo ô, ambarao fa mandeha amin'ny fanekena vaovao fitomboana ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy aho.
7. Tompo ô, ambarako fa hotahina amin'ny zavatra rehetra aho araka ny lamin'i Abrahama amin'ny anaran'i Jesosy.
8. Tompo ô! Aorian'ity vavaka ity dia hanomboka hiroborobo aho ary hanohy hiroborobo mandra-pahatongako ho tena manan-karena amin'ny anaran'i Jesosy.
9. Tompo ô, mampifandray ny tenako amin'ny anarana rehetra mifandraika amin'ny fahantrana aho, manomboka izao dia homena anarana vaovao mifandray amin'ny fanambinana amin'ny anaran'i Jesosy aho.
10. Tompo ô, sokafy ny saiko amin'ny hevitra famoronana izay hampandroso ahy amin'ny anaran'i Jesosy
11. Avelao ny anjelin 'Andriamanitra velona hanomboka hamerina ny fitahiako rehetra nangalatra, amin'ny anaran'i Jesosy.
12. Izaho dia manala ny tenako amin'ny asan'ny mpamosavy, na amin'ny tenin'i satana, amin'ny anaran'i Jesosy.
13. Izaho dia manala ny tenako amin'ny lehilahy mahery rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy.
14. Mandidy ny rahon'ny maizina mba hampiala ahy amiko, amin'ny anaran'i Jesosy.
15. Misarika ny tenako hiala amin'ny lalan'ny fahafatesana sy ny famotehana aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
16. Aoka ny fandringanana rehetra sy ny loza rehetra hananganako ny laoniny, amin'ny anaran'i Jesosy.
17. Nahafoy ny tenako tamin'ny fampahoriana sy ny lamosin'ny razana aho, tamin'ny anaran'i Jesosy.
18. Ny maizina rehetra, aely avy amin'ny fiainako amin'ny afo, amin'ny anaran'i Jesosy.
19. Ny zava-manahirana madiodio rehetra eo amin'ny fiainako, raiso ny zana-tsipikin'ny Fanahy Masina, amin'ny anaran'i Jesosy.
20. Ny herin'ny herin'ny haizina rehetra, izay miasa amin'ny faritra rehetra amin'ny fiainako, hofaranan'ny afo, amin'ny anaran'i Jesosy.
21. Izaho dia mandà ny fanoloran-tena ratsy rehetra amin'ny herin'ny razana avy amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
22. Miverina aho handefa ny olana rehetra voaroaka amiko, amin'ny anaran'i Jesosy.
23. Tompo ô, atorio lalana ho ahy any an-tany fiainana.
24. Izaho dia mandà ny manome ny ahiahy. Tsy isalasalana, mandidy anao ho faty aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
25. Ny fanentanana ratsy rehetra manohitra ny fiainako be voninahitra, mahamenatra, amin'ny anaran'i Jesosy.
26. Aoka ny afon'Andriamanitra hanenjika sy handevona izay mpamono ny ratsy rehetra amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
27. Ny masoko rehetra amin'ny fanahiko dia hohamaizina amin'ny ran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy.
28. Izaho no handresy fa tsy resy, amin'ny anaran'i Jesosy.
29. Izaho dia mitaky ny zoko rehetra amin'ny fifanekena nataoko, amin'ny anaran'i Jesosy.
30. Tompo ô, hikasika ny departemanta tsirairay amin'ny fiainako amin'ny tànanao ankavanana amin'ny anaran'i Jesosy.
31. Tompo ô, vonjeo amin'ny tanan'ny mpampahory aho.
32. Aoka ny herin'ny fanahin'ny manjaka hianjera amin'ny fiainako ankehitriny, amin'ny anaran'i Jesosy.
33. mibebaka aho amin'ny tsy fankatoavana rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy.
34. Tompo ô, diniho ny fiainako ary diovy aho amin'ny anaran'i Jesosy
35 Tompo ô, tariho ny diako mankany amin'ny lalan'ny fandriampahalemana amin'ny anaran'i Jesosy
36. Tompo ô, andefaso fanampiana avy any ambony ho ahy mba hahafahana manakana ny asan'ny devoly amin'ny fiainako.
37. Tompo ô, aza atao ny tsy hamely ahy ho lasa ohatra ratsy amin'ny jesosy
38. Mamatotra ny fanahy rehetra amin'ny tsy fisian'ny fifantohana amin'ny fiainako aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
39. Tompo ô, hosory ny diloilo fifaliana amin'ny anaran'i Jesosy
40. Napetrako teo ambonin'ny fiainako ny ozon'ny Tompo sy ny marika satana rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy.
41. Nijoro teo amin'ny rindrina rehetra tany Jeriko aho nijoro teo anelanelan'ny amiko sy ny fianjerako tamin'ny anaran'i Jesosy.
42. Izaho dia maharesy ny hery miady rehetra izay miady amiko sy ny fianjako amin'ny anaran'i Jesosy
43. Izaho dia manisy loza maharitra mandrakizay amin'ny lahy sy vavy rehetra miady amin'ny fahalavoako
44. Amin'ny herin'Andriama- nitra, dia aparitako ny teti-dratsy rehetra amin'ny helo manohitra ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy
45. Amin'ny herin'ny fanahy masina no andringanako ny teny rehetra hanoherana ny fahatapahanako an'i Jesosy anarana.
46. ​​Ny fahavalo miafina rehetra miady amin'ny fidirako, dia manala anao aho ary manala anao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy.
47. Ny fanahy fanaraha-maso rehetra manara-maso ny fiainako, mandehana jamba ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy
48. Aoka ny tanan'Andriamanitra hamaky ny taolan-damosin'ny lehilahy matanjaka rehetra amin'ny alehako amin'i Jesosy.
49. Miverina any amin'ny mpandefa aho, ny teny ratsy rehetra momba ny fiainako sy ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy.
50. Misaotra anao namaly ny fivavako tamin'ny anaran'i Jesosy.
Previous lahatsoratraVavaka amin'ny Krismasy ho an'ny fianakaviana
Next lahatsoratra30 Ny Vavaky ny Ady dia manohitra ny vehivavy hafahafa amin'ny mariaziko
Niroborobo i Yeboah 26 aogositra 2020 Amin'ny 2:21 hariva
Henry Oktobra 7, 2020 Ao amin'ny 4: 35 am
Misaotra anao tamin'ny fotoanan'ny vavaka, ary tena manentana ahy be dia be sy miasa.
Fitahiana bebe kokoa, esory ny fiainanao amin'ny fahantrana sy ny alahelo.
Mo 14 Oktobra 2020 Amin'ny 3:26 hariva
Fotoam-bavaka mahafinaritra. Tonga mora izany.
CENI 9 Novambra 2020 Amin'ny 6:54 maraina
Nankany anaty zava-bita aho. Misaotra Jesosy
orighomisanvernice@gmail.com March 4, 2021 Ao amin'ny 12: 41 am
Misaotra ny teboka vavaka
Nqabutho Masuku 28 Jolay 2021 Amin'ny 5:57 maraina
Fatima 11 aogositra 2021 Amin'ny 4:30 hariva
Misaotra anao noho ireto teboka vavaka ireto izay nitondra fifohazana teo amin'ny fiainako, amena lehibe.
Mark Destiny 21 aogositra 2021 Amin'ny 6:22 maraina
Misaotra indrindra olona Andriamanitra ô noho ireo teboka vavaka nentanim-panahy avy amin'ny Fanahy Masina ireo, matoky ianao fa tsy misy hevitrao momba ny zavatra nataony teo amin'ny fiainako ny fomba iriko mba zaraiko aminao manokana fa Andriamanitra anie ny voninahitra. Nanomboka nivavaka aho androany ary nomen'ny Fanahy Masina efatra andro hifadian-kanina aho ary hivavaka ireo teboka vavaka 50, iriko ianao hiara-mivavaka amiko ho ahy hanana tanjaka bebe kokoa na dia midika aza izany fa tsy mifady hanina aminao dia mino aho fa manana Andriamanitra nanokatra pejy vaovao ho ahy, lasa ny taloha ny New tonga amin'ny fiainako lava kokoa fa i Kristy dia velona ato amiko amin'ny alàlan'ny asan'ny Fanahiny mpanolo-tsaiko mpampianatra ahy ilay namako akaiky indrindra. Andriamanitra hitahy anao tompoko
Tafara Mpofu 7 septambra 2021 amin'ny 10:45 maraina
Tena nandray soa avy tamin'ireo teboka vavaka aho, Amena Amena sy Amena
Vavaky ny fanafahana avy amin'ny fahababoan'i Satana
Novambra 23, 2019
Zava-bavaka 30 ho an'ny fandrosoana amin'ny alàlan'ny hery
Novambra 14, 2019
Vavaka mba ho feno ny Fanahy Masina
Febroary 4, 2019
Fanambarana mahery vaika hanoherana ny fahafatesana tampoka